Bella Beach Ihhotela, eKrethe (isithombe posted kamuva esihlokweni) - lokhu, ihhotela ezinkulu upscale kuze kube iholidi ngaphambi ogwini Mediterranean. Yakhiwa ngo-1994 futhi uye ukhangwa imibhangqwana nemindeni iziphakamiso zayo "yonke okufakayo" nokuzijabulisa, itholakala khona ehhotela. Ababona kangaka - zokudlela ezimbili, amachibi eziningana futhi endaweni encane spa, kodwa amakilabhu nezindawo zokudlela amatasatasa Hersonissos engafinyelelwa ngeteksi. Nokho, amaholide eziningi akhononda izinga ukudla newayini, ngakho ungase uthande ukucabangela inketho ukukhokha ukuziphilisa.
Bella Beach Ihhotela 5 *: incazelo
Lokhu resort ethule Peninsula Anissaras likwazi ukufinyelela omunye the best olunesihlabathi esifundeni. Bella Beach Ihhotela 5 * yakhiwa kuleli isitayela bukadadewabo yayo ehhotela Silva Beach. Kuyinto ethandwa nemikhaya futhi imibhangqwana amadala, iningi labo zivela eMpumalanga Yurophu. Ihhotela has a yokwamukela izivakashi ivulekile futhi enezinto zokuhlala elanele futhi izitolo eziningana. Kuyakhombisa insimu ka a yokubhukuda esikhulu sizungezwe utshani mahhala futhi zezimbali, kanye mbumbulu isitini ka storeys eziningana okusezingeni eliphezulu.
Hhayi Kugcwele ukushisa iwashi, izinjongo resort, njengoba umthetho, zizogcwaliswa ekupheleni kosuku. Amakamelo ezimbili "pergolas" uhlelo "zonke okufakayo" ikhonza ngesiGreki kanye cuisine ngamazwe wakhonza e isitayela lezitsha. Futhi kusukela kancane esingaphezu yokudlela okukhethekile a la Carte «Olive Tree", okuyinto etholakala imenyu Mediterranean, esibheke kwechibi, kahle esikhanyayo ngemva kokushona kwelanga.
Insephe sandy beach of Anissaras Bella Beach Ihhotela 5 * Deluxe itholakala engxenyeni ephakathi ye ogwini olusenyakatho saseKrethe. Kuyinto drive ngomzuzu-10 (4 km) ngeteksi kusukela izitolo, imigoqo kanye zokudlela resort zaziba nezingxoxo Hersonissos futhi at ibanga isigamu sehora drive kusukela international airport Heraklion (28 km). Eduze kukhona amapaki ezinkulu eziningana amanzi, kanye esiqhingini Spinalonga, ezichazwe encwadini ethengiswa kakhulu kunazo Viktorii Hislop. Kukhona ungathola khona ngesikebhe kusukela beach resort eziseduze Elounda. amaphuzu engeziwe kwezinhloso zenzuzo kungakapheli imizuzu 20 ukushayela - ephapheme Mecca Malia futhi emanxiweni edume kwedolobha Knossos Minoan ezikhathini zasendulo.
Ngo-euro ezimbalwa nje ungakwazi ibhesi Heraklion, esitobhini elingamamitha 700 kusukela ehhotela. Kusuka lapho ngesitimela ungathatha uhambo Old Port kanye Hersonissos. Bobabili uhambo kukhona nice kakhulu futhi ezishibhile, ngakho musa ukuchitha kuyiwe kuhlelwe kulezi zindawo.
Ihhotela inikeza ngezimo kakhulu, futhi nguye endzaweni lenhle ogwini we wayetekula ulwandle efudumele.
Azungeze ichibi eyinhloko ihhotela has eziyisishiyagalombili ezimbili storey izakhiwo ehhotela, isitini izindonga elifudumele zokuhlobisa aluka imivini. Lezi zakhiwo behlaliswe 175 amakamelo Bella Beach Ihhotela 5 *. Kukhona amakamelo ejwayelekile nge sea view, ichibi noma engadini imibono, kanye nomndeni esinamakamelo ezimbili yiminyango. Amagumbi ahlotshiswe ngemibala egqamile of ocher futhi iminqumo oluhlaza, amakamelo ahlanzekile, kodwa abadinga ekubuyekezeni. I balcony ivulekile akuvumela ukuba ujabulele kolwandle, ichibi noma engadini. Zonke amakamelo flat-screen TV, TV satellite, ucingo, i-DVD-player, air conditioning, ikhithi wokulungiselela ikhofi noma itiye ifriji mini. I nenhle zangasese zemabula anemisila noma eshaweni noma ubhavu, a hairdryer, Slippers, bathrobes, lolwandle amathawula. Safes ayatholakala ukuqasha.
inkonzo incekukazi Daily senziwa kanye amathawula washintsha. Umbhede nelineni washintsha katsatfu ngeliviki.
Izivakashi abadinga endaweni ethule, kufanele ukhethe izinombolo amabhlogo 3 no-4, elise esiseduzane kwaleli chibi, kodwa kude izindawo eyinhloko ihhotela ukwenziwa Kwezithombe Ezinyakazayo.
Ikamelo kumele yakhulula Mhlazane kuze 12:00. Ngalesi sikhathi, futhi kudingeka ukuba ukhokhe zonke izikweletu. Uma uhlela sekwephuzile kua-ke lokhu kufanele kubikwe edeskini reception kungakapheli izinsuku ezimbili. Nweba ukuhlala kwabo ehhotela iyatholakala imali, uma kukhona ukutholakala. Isandiso kohlelo "zonke okufakayo" kuya ku-6 ntambama kubiza euro angu-20 umuntu ngamunye. Kulokhu, izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ukuthola isaphulelo 50%.
Nakuba echibini main Bella Beach Ihhotela 5 * futhi iyathandwa emini, indawo lapho iningi izivakashi ukubhukuda futhi ukuthamela ilanga lapho ulwandle sibuyela kwesijwayelekile, kuyinto lolwandle enhle sandy yokungcebeleka elincane. Ngezinsuku zasebusika, ichibi yasendlini sauna, Jacuzzi, Hammam spa ugcwele. Ngokuvamile ophithizelayo kukhona izinkantolo tennis kanye ejimini. Ngokuphathelene yokugcina kungase kuqashelwe ukuthi ububanzi kanye nenani imishini yemidlalo kumele kwenyuke.
Izingane abakhathele of ebhishi kungaba amabombo lokudlala aluhlaza eceleni kwehhotela lethu. Kukhona senhliziyo futhi amaslayidi, kanye club izingane ezincane, lapho kungenzeka ukupenda noma ukudlala imidlalo ebhodi.
Kwasemini kanye dinner, amaholide ithunyelwa yokudlela main "Pergola" nge lezitsha, yakhiwa cuisine isiGreki kusihlwa njalo ukuzijabulisa. Ukuze uthole inkonzo okukhethekile more yokudlela a la Carte «Olive Tree" nethebula kancane nge amakhandlela, imenyu bese ukubukwa wechibi. Inketho "zonke okufakayo" izivakashi bagxekwa izinga ukudla newayini.
Kuwo wonke amahhotela neziteshi isikhungo ibhizinisi inikeza free Wi-Fi, kodwa ijubane layo uma igijima ayiyinhle. Ngokushesha ukuxhuma kwi-Inthanethi, ungakwazi phambili edeskini.
Izici eziyinhloko: Ihhotela isendaweni elibheke olwandle, kukhona evuthayo pool endlini futhi ongaphandle amanzi ezimbili fresh. Izivakashi ingakwazi amathawula khulula, izambulela futhi ilanga loungers. Kanti inikeza isikhungo imfanelo, izinkantolo tennis, spa, inkundla yemidlalo yaseshashalazini.
amasevisi Ihhotela: Igumbi inkonzo, amagumbi omhlangano kwezihlalo 60 futhi 170, igumbi TV, udokotela (icala), exchange, ilondolo nokuthunyelwa kwezingubo elondolo (kwendibilishi), mini-emakethe.
amasevisi Umkhaya: ukudla ngokuvumelana imenyu ekhethiwe, ebaleni lokudlala, indawo yokubhukuda, club, disco izingane, nokugada (kwendibilishi).
izici Igumbi zihlanganisa air conditioning, lokulala ehlukanisiwe egumbini lokuphumula.
Ikheli: Bella Beach Ihhotela 5 *, Greece, Anissaras, Hersonissos 70014.
Bella Beach Ihhotela abasebenzi Ihhotela 5 * (Crete) friendly ngobuqotho, ikhuluma futhi ihlale ikulungele ukusiza. Wazizwa ukuqeqeshwa kwakhe inkonzo ngamakhasimende. Umgoqo wolimi engekho, amaholide wakhuluma kuphela ngesiRashiya.
Ngokombono izivakashi eziningi, iqembu izithombe lapha kunazo zonke ukuthi izivakashi wake wazibona. Abakwazi ugqozi kuwo wonke umuntu, kungakhathaliseki ukuthi umuntu omdala noma ingane, ngaphandle kokukubonisa ekufuna kakhulu. Kusihlwa imibukiso zigcwele amahlaya okufakwe kunabaculi ngabaculi okhokhelwayo. izivakashi eziningi abangazange ngaphambilini kuzijabulisa, lapha okokuqala waqala ukuhlala ehhotela ukubona umbukiso kuhlelwe, ukuthi kusho okuningi.
Bonke abasebenzi Bella Beach Ihhotela 5 *, lapho ukuxhumana izivakashi, ozama kanzima ukuze ajabulise zona. Ngokwesibonelo, ngokukaProfesa izibuyekezo zezivakashi ezazisale ngephutha izinto ehhotela noma endaweni yokudlela, abasebenzi ehhotela wabayisa ikamelo noma elinye ihhotela, ngokwenqaba ukwamukela inkokhelo ngezinkonzo zabo.
. Impendulo kusuka zezivakashi ibibhukelwe ikamelo amahora 15 ngaphambi nje kokufika, masinyane ixazululwe kahle lapho bafuna ukuhlala - Esitezi block enombono ulwandle.
Ihhotela Bella Beach Ihhotela 5 * (Greece) has ithimba Animators. Ziyakwazi avulekile, kodwa uma othile efuna ukuthatha isikhathi sakho kusuka amahora 10:30 kuya ku 18:00, bakwazi ukuhlela. Ngokombono holidaymakers, football mini, i-volleyball yasolwandle namanzi polo ubelokhu waqoqa ithimba ezimbili okuphelele komhlaba wonke. Ungadlala izikhali ithenisi. Ehhotela zikhona izinkantolo ezimbili eqinile. Amabhola kanye Awamarakhethi ayatholakala ngebheyili futhi kusihlwa ukukhanyisa kuyodingeka bakhokhe. Khokha kukhona amabhiliyade, ejimini namanzi ezemidlalo.
Ezinye beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni isimagalo esimweni volleyball ne lezinyawo amabhola, ithenisi Awamarakhethi futhi amabhola for bocce yensimbi.
Ngokusho iningi izivakashi, ukudla ehhotela Bella Beach ke Ihhotela 5 * (eGrisi, eKrethe nase Heraklion) muhle kabi. Ukudla okumnandi, ezihlukahlukene kakhulu futhi kahle yethulwa. Ukuze inyama kukhona choice omkhulu ngempela.
Indawo yokudlela "zonke okufakayo" kuhle kakhulu. Kusukela 7 kuya ku-10 ekuseni wakhonza ethosiwe ubhekeni, zonke izinhlobo ayo amnandi futhi ahlanzekile ngisho champagne. Izimpendulo ezivela izivakashi, kwasemini (12: 30-14: 30), itiye ntambama futhi ikhofi ngamaqebelengwane, amakhukhi, sandwich mini futhi imiqulu mini Futhi kwakusihlwa (19:00 kuya 21:30 (kusukela amahora 16 kuya 18.) ) yilezi ezihlukahlukene uyajabula of inyama, inhlanzi kanye kwasolwandle. Kukhona amafutha, imikhiqizo yobisi, imifino nezithelo ezintsha, kanye nokunye. Ikhaya ezenziwe iwayini, utjwala, ubhiya, izinhlobo ezinhlanu wotshwala ezimbili cocktail non-utshwala, vodka, i-gin, whiskey, i-tequila, utshwala, iziphuzo ezibandayo, amanzi, itiye nekhofi ayatholakala ongakhetha kuzo. Ngesikhathi Niphiwe nokuphuza kanye nje. Lokhu kudinga ukutholakala ikhadi electronic ehhotela.
Ezinye akhononda ngokudla kanye, kunalokho, wakuthola okuyisidina.
Inkantini kanye yokudlela "U-Olive Tree"
Ngo Bella Beach Ihhotela 5 * selikhanyise Amabha 3. "Azalea" itholakala endaweni yokwamukela izivakashi (ivulekile kuze eyodwa ekuseni), "Rotunda" - echibini (ivulekile kuze lesithupha ntambama) kanye "Oasis" - ogwini (evulekile kusuka 12 kuya kwezingu-8 ntambama phakathi nenkathi okusezingeni eliphezulu). Ice cream yonke indawo futhi ngaso sonke isikhathi kusukela amahora 10 kuya 23.
Izivakashi belulekwa ukuba uvakashele yokudlela "U-Olive Tree", evulekile kusuka 7 ntambama kuya ku-10 ntambama. Ukuze uthole imali eyengeziwe ungakwazi oda, isibonelo, ama-lobster omkhulu. Abaningi bathi izinkinga ne ukudla okumnandi kule ehhotela akuyona.
Ukuze uhlale ezindaweni zomphakathi ehhotela ngemva lesithupha ntambama, kuzomele ube bafake abayitoho nenhle, futhi yokudlela "Pergola" Akuwona wonke umuntu osamukelayo uphungula izinwele futhi flip-flops.
Ibhishi omuhle, omkhulu, 150 nje amamitha ukusuka ehhotela. Izivakashi ukuchitha isikhathi esiningi Sunbathingkuva loungers noma ukuzibandakanya snorkel. Ngo kolwandle ungabona ezinye ezidotshwa ezixhotsheni zamakhorali ezimibalabala. Sunbeds, izambulela kanye amathawula zinikezwa mahhala. Ukuze ukulahlekelwa lolwandle amathawula basolwa at 20 euro.
Ngokombono holidaymakers, lolwandle zisesimweni esihle. Isihlabathi uhlanzekile, kukhona zokuhamba sokhuni, inkantolo volleyball futhi indima ethile encane ebhishi kusukela ehhotela. Ukuze zonke wababhukudi elandelayo.
Akukhona 5 izinkanyezi
Ezinye izivakashi bakholelwa ukuthi Bella Beach Ihhotela 5 * (Crete) - lokhu akulona ngempela ehhotela 5 inkanyezi. Futhi ukunikeza ukucabangela ukwehlisa esigabeni sayo kuze 4 izinkanyezi noma mhlawumbe ngisho angu-3, ngoba nakanjani akaphinde asibalele kuze 5. Ihhotela aphambili kunikeza nezinga elifanele ukunethezeka, nakuba zikhona izinsiza eziningi ezinikeziwe, Bella Beach Ihhotela umane alinikezi ezingeni wenduduzo.
Sitolo sekudla lokuphekiwe, ibha, ichibi futhi amakamelo nje Okuqukethwe akuzwakali kakhulu ukuba aphambili. Ngokwesibonelo, endaweni yokudlela ungumuntu omuhle, kodwa ezingeni eliphansi izinga ukudla. Okuqukethwe akuzwakali kakhulu "splash" nge sunbeds ambalwa eziphukile. Izingadi ezingeni maphakathi, futhi ezinye izindawo igcwele ukhula.
Ngokombono holidaymakers, amakamelo ehhotela Uyi isidingo kancane eyabhalwa futhi ekhuthaza ukubuyekeza, e yokudlela eziningi izimpukane, okuthiwa orange juice kuyinto exutshwe namanzi amaningi, iwayini wakhonza kusukela empompini self-service, kanye newayini elibomvu kuyinto enyantisayo ikakhulukazi. Ukudla fresh, kodwa Okuqukethwe akuzwakali. Iziphuzo asizwa izinkomishi plastic amancane mojitos, Prosecco, ikhofi kanye frappe abafakiwe izindleko iphakethe "zonke okufakayo".
Bella Beach Ihhotela 5 * lezivakashi libuyekeza ukuhlolwa omuhle izici ezilandelayo:
Ihhotela ungaphakathi isitayela yezwe futhi kuhlanganisa indawo kunothile zasemazweni.
yindlela elula ezokuthutha, kuhlanganise amatekisi, ukuze Hersonissos ngoba ethenga bese evakashela kuma-nightclub.
A strip omude sandy beach eseduze ehhotela; amanzi ezemidlalo itholakala eduze.
Inala imisebenzi izingane, kuhlanganise mini-igalofu ngenkambo 16 imbobo, table tennis kanye club yezingane.
Ehhotela kukhona zokudlela eziningana ezingamabhangqa nemigoqo.
I eliyifa njalo lokuzijabulisa namaholide.
Kukhona spa nobungqabavu izikhungo ezincane.
Kukhona amachibi eziningi, kuhlanganise nezingane zasendlini, ngaphandle futhi.
Ukuba khona ku-site izindawo ezifana nezinkantolo ithenisi kanye yaseshashalazini ongaphandle.
Mahhala yokupaka ne-Wi-Fi.
Ngo Bella Beach Ihhotela 5 * (Crete) lezivakashi izibuyekezo bokwenza lokhu okulandelayo:
Ezinye izihambeli akhononda ikhwalithi ukudla newayini.
-Wi-Fi emakamelweni zingase zingatholakali kwezinye izindawo.
Nakuba amakamelo zihlanzekile futhi kuvulandi enhle, ezinye zazo badinga redecorating kancane.
Sekube izikhalazo ngokuntuleka ukuzijabulisa eduze ngokushesha ehhotela.
Ezinye izihambeli wakhononda amanzi abandayo egumbini eshaweni.
Iningi endaweni ehhotela inkimbinkimbi ukuhamba kuwo.
Amahhotela e-Stupino (esifundeni eMoscow): incazelo, izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela Bella Vista kuyona 4 * (Egypt / Hurghada): incazelo, izithombe, izibuyekezo zezivakashi
Lapho amaprotheni asezingeni zamagama kwenzeka? Ingqikithi inqubo, nendawo amaprotheni zamagama kuseli
"Adameks Nitro" - induduzo usizo
The Fish - yokudlela zomhlaba ngaphansi kwamanzi
Sauce ngokuba salmon - Ukupheka ubumnandi.
Izimbangela acinene ukopha nokwelashwa kwazo
Eucalyptus kubalulekile uwoyela: izakhiwo kanye izicelo, imiyalelo kanye impendulo